မုန်တိုင်းရေဒါ- ၎င်းသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် အဘယ်အရာအတွက်နှင့် အရေးကြီးသနည်း။ ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 03/01/2022 09:47 | မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ
ယနေ့ခေတ်တွင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော နည်းပညာကြောင့် လူသားများသည် ရာသီဥတုကို ပိုမိုတိကျမှန်ကန်စွာ ခန့်မှန်းနိုင်ကြသည်။ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ မုန်တိုင်းရေဒါ. ၎င်း၏အမည်က အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း တိမ်ထူထပ်နေပြီး မုန်တိုင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်လောက်အောင် မတည်မငြိမ်ဖြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် မုန်တိုင်းရေဒါအကြောင်း သိလိုသမျှ၊ ၎င်း၏ လက္ခဏာများနှင့် အသုံးဝင်ပုံကို ရှင်းပြပါမည်။
2 Storm Radar အလုပ်လုပ်ပုံ
3 အတိတ်သမိုင်းနှင့် အသုံးချမှု
4 ပျံသန်းမှု အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းတွင် အရေးကြီးပါသည်။
မုန်တိုင်းရေဒါသည် အမြင့် ၅ မီတာမှ ၁၀ မီတာအထိ မြင့်သော မျှော်စင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဖြူရောင်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော စက်လုံးပုံအမိုးခုံးတစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဤအမိုးခုံး၏ရေဒါကို ဖန်တီးပေးသော အစိတ်အပိုင်းများစွာ (အင်တင်နာများ၊ ခလုတ်များ၊ ထုတ်လွှင့်စက်များ၊ လက်ခံကိရိယာများ ...) ရှိသည်။
ရေဒါ၏ ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်ပတ်လမ်းများသည် ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် မိုး၏ပြင်းထန်မှုကို ခန့်မှန်းခွင့်ပြုသည်။အစိုင်အခဲပုံစံ (နှင်း သို့မဟုတ် မိုးသီး) သို့မဟုတ် အရည်ပုံစံ (မိုးသီး)။ မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် အလွန်ပြင်းထန်သော မုန်တိုင်းများ သို့မဟုတ် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းကဲ့သို့သော အပျော့စားအခြေအနေများတွင်၊ အလွန်အားကောင်းပြီး ငြိမ်သက်နေသော မိုးကြိုးဝိုင်းများရှိသည့်နေရာ၊ ဆိုလိုသည်မှာ တစ်နေရာတည်းတွင် မိုးများစွာစုပုံလာသောအခါ၊ အချိန်တို။ အချိန်ဘောင်။
Storm Radar အလုပ်လုပ်ပုံ
မုန်တိုင်းရေဒါ၏ လည်ပတ်မှုနိယာမသည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အမျိုးအစား ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုအပေါ် အခြေခံသည်။ ဤအလင်းတန်းများ သို့မဟုတ် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်သော အလင်းများသည် လေထဲသို့ အများအပြား lobes ပုံစံဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားကြသည်။ သွေးခုန်နှုန်းသည် အတားအဆီးတစ်ခုနှင့် ကြုံတွေ့ရသောအခါ၊ ထုတ်လွှတ်သော ဓာတ်ရောင်ခြည်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် အရပ်ရပ်သို့ ပြန့်ကျဲနေပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် လမ်းကြောင်းတိုင်းတွင် ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည်။ ရေဒါ၏ ဦးတည်ရာသို့ ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး ပျံ့နှံ့နေသော ရောင်ခြည်၏ အစိတ်အပိုင်း သင်လက်ခံရရှိသည့် နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။.
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပထမဦးစွာ ရေဒါအင်တင်နာအား အချို့သော elevation angle တွင် နေရာချထားခြင်းဖြင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်မျိုးစုံကို လုပ်ဆောင်ခြင်း ပါဝင်သည်။ အင်တင်နာ၏ အမြင့်ထောင့်ကို သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်၊ ၎င်းသည် စတင်လည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။ အင်တင်နာသည် သူ့ဘာသာသူ လှည့်သောအခါတွင် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်သည်။
အင်တင်နာသည် ၎င်း၏ခရီးကို ပြီးမြောက်ပြီးနောက်၊ အင်တင်နာကို အချို့သောထောင့်သို့ မြှင့်တင်ရန်၊ အစရှိသည်ဖြင့်၊ အချို့သော elevation angles အရေအတွက်ကို ရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် Polar Radar Data ဟုခေါ်သော မြေပြင်နှင့် ကောင်းကင်တွင်ရှိသော ရေဒါဒေတာအစုအဝေးကို သင်ရရှိပုံဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ရလဒ် ၎င်းကို spatial scan ဟုခေါ်ပြီး အပြီးသတ်ရန် 10 မိနစ်ခန့် ကြာသည်။ ထုတ်လွှတ်သော ဓာတ်ရောင်ခြည် ပဲမျိုးစုံ၏ ဝိသေသလက္ခဏာမှာ ၎င်းတို့သည် အလွန် စွမ်းအားရှိရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ထုတ်လွှတ်သော စွမ်းအင်အများစုမှာ ဆုံးရှုံးသွားပြီး အချက်ပြမှု၏ အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်ကိုသာ လက်ခံရရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အာကာသစကင်န်တစ်ခုစီသည် ၎င်းကိုအသုံးမပြုမီ စီမံဆောင်ရွက်ရမည့် ပုံတစ်ပုံကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤပုံသဏ္ဍာန်လုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် မြေပြင်မှထုတ်လုပ်ထားသော မှားယွင်းသောအချက်ပြမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်းအပါအဝင်၊ ပြုပြင်မှုများ အများအပြားပါဝင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ တောင်မှထုတ်လုပ်ထားသော မှားယွင်းသောအချက်ပြမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်းပါဝင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမှ ရေဒါ၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအကွက်ကို ပြသသည့် ပုံရိပ်တစ်ခုကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဆိုသည်မှာ အမှုန်အမွှားတစ်ခုစီမှ ရေဒါသို့ လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်ပါဝင်မှု၏ ပြင်းအားကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။
မိုးရေဒါမတီထွင်မီက သင်္ချာညီမျှခြင်းများကို အသုံးပြု၍ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များကို တွက်ချက်ခဲ့ပြီး မိုးလေဝသပညာရှင်များသည် ရာသီဥတုကို ခန့်မှန်းရန် သင်္ချာညီမျှခြင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ 1940 ခုနှစ်များတွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ရန်သူများကို စောင့်ကြည့်ရန် ရေဒါများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤရေဒါများသည် မကြာခဏ ကျွန်ုပ်တို့ Yufeng ဟုခေါ်သည့် အမည်မသိအချက်ပြမှုများကို တွေ့ရှိရသည်။ စစ်ပွဲအပြီးတွင် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ကိရိယာကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ကျွမ်းကျင်ပြီး ၎င်းကို ယခု ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိထားသည့် မိုးနှင့်/သို့မဟုတ် မိုးရွာသွန်းရေဒါအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
မုန်တိုင်းရေဒါသည် မိုးလေဝသပညာ၏ တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။မိုးလေဝသဌာနကြီးများသည် ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအတွက် သတင်းအချက်အလက်ရယူရန်၊ ထို့အပြင် cloud ၏ ရွေ့လျားမှုပုံစံများ၊ ၎င်း၏လမ်းကြောင်းနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်တို့ကိုလည်း သင်ကြိုတင်နားလည်နိုင်သည်။ မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်စေတဲ့နှုန်းနဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေ၊
မိုးရွာသွန်းသောရေဒါမှပေးသောခန့်မှန်းချက်၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ရှုပ်ထွေးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်မိုးလေဝသအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ ရေဒါသည်အကွာအဝေးအတွက်တိကျသောအချက်အလက်များကိုမပေးသောကြောင့်၎င်းသည်မိုးလေဝသပစ်မှတ်၏တည်နေရာအတိအကျကိုသိရန်ခက်ခဲသည်။ ဤသည်မှာ စကားပြောဘာသာစကားဖြစ်သည်။
အတိကျဆုံး ခန့်မှန်းချက်များကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် မိုးလေဝသပညာရှင်များသည် ရှေ့သို့ ရွေ့လျားမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်ကို လေ့လာကြသည်။ နေရောင်ခြည်သည် တိမ်များကိုထိမှန်သောအခါ ရေဒါသို့ထုတ်လွှတ်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ၏ ကြိမ်နှုန်းသည် ပြောင်းလဲသွားကာ မိုးရွာသွန်းနိုင်သည့် လက္ခဏာများကို နားလည်နိုင်စေသည်။
ပြောင်းလဲမှုသည် အပြုသဘောဆောင်ပါက၊ ရှေ့ချဉ်းကပ်မှုများနှင့် မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေ တိုးလာပါမည်။ သို့မဟုတ်ပါက ပြောင်းလဲမှုသည် အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်နေပါက ရှေ့ဘက်တွင် နောက်ဆုတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေ လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။. ရေဒါမှ အချက်အလက်အားလုံးကို ကွန်ပျူတာပုံသို့ ပေးပို့သောအခါတွင် မိုးရွာသွန်းမှု၏ ပြင်းထန်မှုအပေါ် မူတည်၍ မိုးရွာသွန်းမှု ၊ မိုးသီး သို့မဟုတ် နှင်းများ၏ ပြင်းထန်မှုအလိုက် အရောင်များကို အနီရောင်မှ အပြာသို့ သတ်မှတ်ပေးသည် ။ .
ပျံသန်းမှု အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းတွင် အရေးကြီးပါသည်။
ပထမဆုံး ပြောချင်တာက မိုးလေဝသ ရေဒါ ဟာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းရေးကိရိယာ မဟုတ်ဘဲ စူးစမ်းလေ့လာရေး ကိရိယာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကို ပြသပေးတာပါ၊ ဒေတာစုဆောင်းသည့်အခါ မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ (sweep).
သို့သော်၊ အချိန်နှင့်အမျှ မိုးရွာသွန်းမှုပမာဏ မည်မျှပြောင်းလဲလာသည်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏အနာဂတ်အမူအကျင့်ကို "ခန့်မှန်း" နိုင်သည်- ၎င်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်လား။ ငါတို့လမ်းပြောင်းမှာလား။ ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ၊ မုန်တိုင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသည့်နေရာများကိုရှောင်ရှားရန် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များစီစဉ်နိုင်ပါသလား။
ရေဒါမှ စုဆောင်းရရှိသော အချက်အလက်များကို မတူညီသော မျက်နှာပြင်ပုံစံများဖြင့် ပြသထားသည်။ ဆက်လက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျံသန်းမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၏ အရေးကြီးဆုံး ကဏ္ဍနှစ်ရပ်ကို ဖော်ပြပြီး အခြားအကြောင်းအရာအချို့ကို ကိုးကားပါမည်။ ၎င်းတို့ကို Doppler ရေဒါတိုင်းတာခြင်းမှလည်း ထုတ်နုတ်ပါသည်။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း မုန်တိုင်းရေဒါသည် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အတွက် အတော်လေးအသုံးဝင်ပြီး ပျံသန်းမှုအစီအစဉ်ဆွဲရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်ဖြင့် မုန်တိုင်းရေဒါနှင့် ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » မုန်တိုင်းရေဒါ